चलचित्र – Page 390 – Medianp
किशोर भण्डारीको नयाँ चलचित्र ‘चंगा’ मा बुद्धि तामाङ लिड रोलमा, जेठ ११ गते रिलिज हुने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०४, २०७४०९:३३
काठमाडौं, ४ माघ । कलाकार किशोर भण्डारीले बुद्धि तामाङलाई लिड रोलमा लिएर ‘चंगा’ चलचित्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । बुधबार मण्डला थिएटरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा चलचित्र निर्माणको घोषणा गरिएको हो । ‘चंगा’मा बुद्धि तामाङका अलावा कमलमणि
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१७:२७
२०१८ मा बलिउडमा अक्षयकुमारले धमका मच्चाउने ! आउँदैछन् यी फिल्म
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१४:०२
काठमाडौं, ३ माघ । बलिउडका ‘खेलाडी’ अक्षयकुमार अहिले फिल्म ‘प्याड म्यान’ को प्रोशनमा व्यस्त छन् । अक्षय एक्ला यस्ता सुपरस्टार हुन्, एक बर्षमा सबैभन्दा बढी फिल्म गर्छन् । उनी सँधै अनौठा र सामाजिक मुद्धा उठाएर फिल्म
सैफ अलीकी छोरी साराका विकिनी तस्विर भाइरल
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१३:४४
काठमाडौं, ३ माघ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘बिग बोस’ का मास्टर माइन्ड विकास गुप्ताका चक्मा दिने तस्विर भाइरल भइरहेका छन् । यी तस्विर पुराना हुन्, तर अहिले भाइरल भइरहेका छन् । गुप्तासँगै बलिउड अभिनेता सैफ अली
अनमोल केसी बने बनेली मोटरसाइकलको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१२:५३
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सबैभन्दा महँगा स्टार अनमोल केसी बनेली मोटरसाइकल कम्पनीको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बनेका छन् । उनले सो ब्रान्डको मोटरसाइकलमा मोडलिङ गरेबापत १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको बताइन्छ । अनमोलले आफ्नो फेसबुकमा
‘दबंग–३’ मा सलमानले सोनाक्षी सिन्हा र मौनी रायसँग रोमान्स गर्ने !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१२:३०
काठमाडौं, ३ माघ । बलिउडका ‘दबंग’ सलमान खानको हालै रिलिज भएको ‘टाइगर जिन्दा है’ ब्लकबस्टर भएको छ । यो फिल्मले केही रेकर्ड समेत तोडेको छ । सलमानका आगामी फिल्म ‘रेस–३’ र ‘भारत’ हुन् । जसलाई अहिलेबाटै
‘लिलिबिली’ को गीत ‘इज इट लभ’ एक नम्बर ट्रेन्डिङमा, रूचाइयो प्रदीप र जसिताको जोडी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४१२:१०
काठमाडौं, ३ माघ । चलचित्र ‘लिलिबिली’ को गीत ‘इज इट लभ’ युट्युवको एक नम्बर ट्रेन्डिङमा आएको छ । सोमबार रिलिज भएको गीतलाई अहिलेसम्म ६ लाख बढी पटक हेरिएको छ भने भिडियोमा १२ हजारले लाइक गरेका
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४११:३१
काठमाडौं, ३ माघ । सन्जु विकेको ‘याद’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको शव्द सन्जु र ज्योती विकेले लेखेका हुन् भने कम्पोज समेत सन्जुले नै गरेका हुन् । ﻿ गीतको एरेन्ज तथा भिडियो निर्देशन संगीतकार
करिना र सोनम कपूर स्टारर फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ को पोस्टर रिलिज
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४११:१९
काठमाडौं, ३ माघ । करिना कपूर र सोनम कपूर स्टारर फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ को पोस्टर रिलिज भएको छ । फिल्मको पोस्टर सोनम कपूरले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी छन् । यो फिल्म करिना आमा बनेपछिको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४०९:३१
काठमाडौं, ३ माघ । नायक निखिल उप्रेतीले सर्लाहीका विनाग्रा र पिपराभित्ताका १५० घरपरिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित हेयर डे«सर राम ठाकुरको पहलमा निखिलले मंगलबार दुवै ठाउँका गरिव र विपन्न
Previous 1 … 389 390 391 … 440 Next